It seem under Dr.Abiy’s administration things are getting worst for the Oromo people! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIt seem under Dr.Abiy’s administration things are getting worst for the Oromo people!
ONN: Amajji 10,2019-Adaamaa
Torban darbe keessa barattooni sadii ajjeefamanii kuusaa bishaan xurii keessati argamuun kan yaadatamudha. Haaluma kana hordofuun hiriyyooni barattoota kanaa gadda isaanii akka hin ibsanne dhorkamanii ture. RIB mooraa keessa jirus “inu miti, miseensi keenya bakka sana hin jiru” jechuun bakka barattooni jiran dhuunfaa dhuunfaan deemuun waakatan. Garuu ijoolleen arka namaatiin akka miidhaman ragaaleen karaa ogeeyyii qorannoo ifa ta’uu dhabus dhugaansaa garuu akkas:
1) barattoonni qaamni issaanii madoo qaba, keessumaayyuu mucaan Abbaabiyyaa Badhadhaa jedhamu, mormi kan aqaaqame, ilkaan irraa caccabee fi kalee isaarras madoon kan jiru ta’uu isa hojjetonni guyyaa yaada isaa karaa keessaa nuun ga’aniiru, abbaan mucaas dubbateera.
2. Ijoolleen kun bishaan alatti ajjeefamanii akka bishaan itti gataman kan ibsu, reeffi ijoollee garaan hin bokokne👉🏿hin dhugne.
3) Midiyaalee adda addaarratti ibsi karaa qaama qoratuu dhiyaate gonkumaa amansiisaa miti, “ijoolleen bishaan ‘waste water treatment pond’ daakuuf seenan sadii lubbuun isaanii darbuu dandayeera” jedha. Kun tasuma kijibarra darbee xiinsammuu barattootaa fi Maatii barattoota Lubbuun darbee kan miidhuudha.
Guyyaa gaafasii irraa jalqabanii immoo nama qofaa argan reebuu eegalan. Keessatu mana kitaaba irraa barattoota galan halkan reebu.
Kun kanaan osoo jiru hiriyyooni barataa du’e konkolaataa mooraa eyyamsiisuuf barattooni kudhan hin caalle gamtaa barattootaa fudhatanii dhaqan. Maarree RIB immoo isaan du’an baga du’an jechuun miira ijoollee xuquun akka bittinan godhe. Barattooni immoo bilchinaan hubachuun gamataan barata YOSEEF DHINSA akka isaan waliin jiru akeekan.
YOOSEEF immoo “ana waliin jiru, rakkoo qabu jechuun” itti hime. “Maal sigalche” jedhaniin. Innis deebise “issin caalaa itti gaafataman qaba bira osoon jiru ijoollee doorsisuus reebuunis hin barbaachisu” jedhe. YOSEEFIIN cunqursuun fudhanii deemanii boodarra gadi dhiisan.
Yerooma sanatti barattooni achitti hafan marii eegalan barataan DAAWITI JEDHAMU waggaa 4ffaa, dhalootaan tigiree ta’e barataa oromoo maqaan maso TOLEE waggaa 2ffaa funyaan dhahe. Sababa malee jeequmsi haa uumamuuf. Ammas barattooni oromoo bilchinaan ilaaluun mucaa reebuu irraa of qusatan barataan tigiree kunisi RIB mooraa keessaa jiruun hariiroo qabaachuun bira gahameera.
Galgaluma guyyaasanaas RIB barattootaa sadii reebaniiru. Barattooni mooraa keessas sodaa guddaa keessa jrra. Barattooni du’an akkamitti akka du’an ibsi barattootaf hin kennamne.
Gochi ‘president’ barattootaa irratti raawwatame kunis miira ijoollee gaddisiiseera. “Nutis jiraachuu keenya maaliin mirkaneeffanna” jedhee barataan “sammuu ittiin barannu hin qabnu!” Jedhee murteesse.
Akka sagantaa tti qormaanni ‘Mid term exam’ guyyaa kaleessaa ture. Garuu barataan quwachuu waan dadhabeef…. akkasumas sirna DUNGOO QABSIISUU irratti akka RIBn hin ugguramneef akka mariyatamuuf ‘PRESIDET ‘ mooraaf beellamnaan “an barattoota arguu hin barbaadu” jedheen. Kunis irra caalaa garaa barattootaa fageessee jira. Egaa sa’aatii amma Barnoonni dhaabbatee jira.
Guyyaa arraa wanti ta’a jiru :
1. Sa’aatii 2 irraatti Gamtaa Barataa yaamanii DURA TA’AA Barataa kan ta’e, YOSEEF DHINSAA tiin, ” waraqaa ‘resign’ nii galshi nut nama nuuf ta’u beeknaa” jedhan.
2. Barattoota 56 ‘select’ godhanii waamanii “isinituu mooraa kana gara fedhetti ofuu danda’a. Kanaaf dafa barataa barumsatti deebisaa ykn tarkaanfiin isinirraati fudhatama” jechuun Barattoota kana doorsiaanii jiru! Kanaaf booda barattoonni kun yoo ariyaman ragaa tokko malee ta’uu isaa hubachuu qabuu qaba uummanni !!